कानुन, सरकार र नागरिक, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
कुनै पनि देशको सरकार र त्यस देशका नागरिक कानुनमा बाँधिएका हुन्छन्। सरकार संचालक र नागरिकहरु दुवैले कानुनको पालना गरी सधै कानुनप्रति वफदार हुनुपर्छ। कानुन भन्दा माथि कोही छैन भने, कानुन भन्दा माथि कोही हुनु पनि हुँदैन। कानुन, सरकार र नागरिक भनेका एउटै एउटै अंङ्ग हुन्। कानुन, सरकार र नागरिक एक भएपछि मात्र देशमा शान्ति स्थायित्व हुन्छ र सहितको समृद्ध हुन्छ। यदि कानुनलाई सरकार र नागरिकले कार्यान्वयन गरेनन् भने देश अराजकतामा जान्छ।
अन्ततः कानुनको लागि सडकबाट सत्तासँग लडाइँ हुन्छ। यसरी गरिएको कुनै पनि लडाईँले सही र गलत जुन पक्षको पनि फैसला गर्न सक्छ। त्यसैले अहिलेसम्म देशमा भएका कुनै पनि सडक आन्दोलनले सत्तालाई जहिले पनि चुनौती दिदैं आइरहेका छन्। सडक आन्दोलन यति शक्तिशालि बन्दै गएको छ, जसले सरकारलाई झुक्न र कानुनलाई निरीह बनाउन बाध्य बनाइन्छ।
लेखक: प्रेमबहादुर शाही
जसको पछिल्लो प्रत्येक्ष उदाहरण हुन लोकतन्त्र गणतन्त्र सहितको संघीय संविधान ल्याउनु। यी सडकबाट गरिएका माग यति शक्तिशालि बने जसले कानुन भनेको के हो? सरकार भनेको को हो? नागरिक भनेका को हुन्? प्रष्टाई दियो। राजनीतिक परिवर्तनका लागि भनेर गरिने सडक आन्दोलन शक्तिशालि हुनु स्वाभाविक कै मानिन्छ। तर, सरकारको विपक्षभई कानुलाई निरीह बनाउनु अस्वाभाविक हो।
के कानुन सरकार र नागरिक प्रति हैन? यदि हुन भने किस सवै जिम्मेवार हुदैनन्? कानुनलाई किन पालना गरिँदैन? अझै भन्नु पर्दा हाम्रो देशमा परिर्वतनका नाममा गरिने आन्दोलन कति ठिक छ कति बेठिक छ भनेर कुनै पनि लेखाजोखा गरिदैंन। जसले गर्दा कति फाइदा हुन्छ भने कति बेफाइदा हुन्छ। केही सीमित नागरिकहरु जंगलबादेखि सडकबाट चिच्याई÷चिच्याई सात्तापक्षलाई गलाई कानुनको धज्जी उढाएको हामीले देखेका छौं।
शान्तिपूरण गरिन सक्ने आन्दोलनलाई हिंसामा परिणत गरियो। हाम्रो लागि यो भन्दो ठूलो लज्जामत अरु के हुन सक्छ? कानुन, सत्ता र नागरिकसँग अनेकौं संकटहरु आउन सक्छ तर सवै लागेर संकटलाई समधान गर्नु बुद्धिमानी मानिन्छ। नागरिक, राज्य संचालकले कानुनलाई खेलाँची गर्दाको परिणाम आज कानुन, सत्ता र नागरिक भन्दा सडक आन्दोलन बलियो हुँदै गएको छ।
यसरी सडक आन्दोलनले कानुन, सत्ता र नागरिकलाई चुनौति दिदै जाने हो भने, अवका आउने दिनमा सत्ता समाल्नको लागि कुनै पनि नेतृत्वकर्ताहरु अनुच्छिक देखिने छन्। जसले गर्दा देशमा शान्ति स्थायित्व र विधिको शासन स्थापना गर्न देशमा अझ दर्शर्कौ वर्ष लाग्ने छ। जवसम्म कानुन, सरकार र नागरिक एक अर्काका परिपुरक हुन भन्ने ठानिदैन तबसम्म कानुन, सरकार र नागरिक भएको सवैले अनुभूति गर्न पाउँदैनन्।